Ralph Waldo Emerson mar sheegay, "Caafimaadka waa Xoolo ugu weyn."
Laakiin nasiib daro, aad u tiro badan oo naga mid ah ay ka shaqeeyaan at a "hoos u dhaca."
Dhalleecyaan kombiyuutarada iyo hab nololeedka ka badan yah; mulkiyadooda makhaayadaha cuntada dhakhso sabab u ah jadwalka kulamada; si fudud la'aanta ama a of wacyiga ku saabsan ku dhaqanka caafimaad leh.
Ka fiirso tirakoobka soo socda:
Sida laga soo xigtay CNN.COM, buurnaanta ka mid ah dadka waaweyn ee America ayaa u dhaxeysey 1990 iyo 2010.
Kharashka daryeel caafimaad Annual ee buurnaanta ka badan $140 billion.
The Center for Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada ayaa sheegay in sigaarka oo sababa badan 480,000 geeri sanad walba in laga xoreeyo dalka ka.
Sigaarku waa sababta horseedda in dhicis dhimashada.
Buurnaanta iyo buuran noqon kartaa arrin khatar ku kobcidda ragaadiyey, iyo cudurada qaarkood sida a: cudurka wadnaha, Nooca 2 diabetes, qaar ka mid ah Kansarada iyo cadaadis dhiig oo sarreeya.
Laakiin, waxaa war fiican. In kasta oo aan had iyo jeer ma xakamayn karo dhaxaltooyo, Masiirka, ama xidhiidh buuna ah ee shukulaatada, waxaa jira tallaabooyin cadna qaar ka mid ah aynu qaadi karno in ay daryeesho caafimaadka fiican.
SIDAN sabab aan...
1. Caafimaad wanaagsan noo ogolaadaa in ay la kulmaan in ay xiriir wanaagsan. The fiican waxaan dareemaynaa, si fiican u niyaddaada noo, (sida caadiga ah), taas oo ka dhigaysa noo dheeraad ah u wacan in qiyaastii noqon oo la macaamilaan. Weligaa ma ka ag qof oo weligoodba ka cabanaya oo ku saabsan xanuun iyo kaar? Ama yaa baddhamada aad ugu sababtoo ah waxa ay mar walba yihiin xanaaq? Waxaa hubaal ah gelin karaa ridin on factor ee xiiso leh.
2. Caafimaadka wanaagsani waxa uu keenaa madaale fiican, xoog, oo ay gaaraan koboc. Waxaa noo ogolaadaa in ay qayb ka noqdaan howlaha jirka iyada oo aan xayiraado iyo xadad.
3. Caafimaad wanaagsan noo ogolaadaa in ay ka madax bannaanaadaan, iyo kuwa kale oo aan u baahnayn (ama sababo dibada) si ay u siiyaan for our daryeel maalmeedka; waxa uu muujinayaa tixgelin kuwa aan danaynayaa.
4. Caafimaadka Good ogol yahay socdeyba weyn oo tayo nolol oo fiican.
5. Caafimaadka Good lacag. Taasi waa xaq. Waxaa hortagi karaa daawo qaali, kharashka booqashada dhakhtar joogto ah ee, iyo lacagta caymiska sare.
6. Caafimaadka Good kor u muuqaalka. Tixgeli gabadha la maqaarka Daawatay, rakuubbo khariidadda lixdii, iyo kuwa tirooyinka quruxsan in uu oggolaan inay eegto cabsi badan oo dhar ah oo ay ku xiran. "Marka aad eegto wanaagsan, aad dareento wanaagsan. "
Iyadoo tan maskaxda, halkan waa kuwo sahlan dhowr, siyaabaha si degdeg, u saameyn xanuun oo qoto dheer iyo caafimaad wanaagsan.
Uu qaado tallaabo yar. Sida wax kale oo badan oo nolosha ah, hab si tartiib ah waa fiican. Ka bilaw cunaysa miraha iyo khudaarta ka badan maalin kasta oo wax cunaya si dhexdhexaad ah.
Haddii aad sigaar cabto, tago.
Ha jeclaan jimicsi? Tixgali. Tusaale ahaan, Waxaan jecel cayaaray. Ma ogtahay in qoob sidoo kale waa in ay gubaan calories oo aad ku yeelatid qaab dariiq madadaalo? Ka fikir qaadashada class Zumba ah ee aaggaaga. Ama laga yaabaa bowling ama dabaasha noqon lahaa dheeraad ah si aad ka jeelahay. Wax waa ka wanaagsan yahay waxba.
Cab biyo dheeraad ah. Waxaa wanaagsan ee maqaarka oo dareen ka baxay nijaasta.
Hel nasasho ku filan. Khubarada ku talin ku saabsan siddeed saacadood habeen.
Inay leeyihiin xayawaanka ah. Waxbarashada Health muujinayso in qaadashada hal siisaa faa'iidooyinka caafimaad oo kala duwan, waxayna ku siinaysaa dareen ah saaxiibnimo.
Hadiyad ugu weyn ee aad siin kartid naftaada iyo wehelkaaga waa caafimaad wanaagsan– maskaxda, dareenka iyo jirka.
Fiiro: Macluumaadkan looguma talagalin inay ku badallano Aayad u heshid talo caafimaad ka xirfadlahaaga daryeelka caafimaadka. La tasho dhakhtarkaaga halkaas oo ay khuseyso.
Warka of "bachelor xaqiijiyay" George Clooney faafin sida ugu dhakhsaha badan dab dufan ah ee jikada ah; la yaab leh ummadda,...